Ma arki kartaa iftiinka? Kaliya leh Linaalka Midigta! - 2019 NAB Muujinta Wareysiyada by Broadcast Beat. Wargeyska rasmiga ah ee NAB Show, Soo-saaraha NAB Show LIVE
Home » content abuurkii » Waxaad ka arki kartaa Light ah? Kaliya la Lens Xuquuqda!
Waxaad ka arki kartaa Light ah? Kaliya la Lens Xuquuqda!
Muraayadaha Layard (aka Nimrud Lens)
Lanshanka ugu caansan ee la ogaaday, illaa hadda, waa Layard Lens (aka: "Nimrud Lens"); waxaa laga helay by AH Layard ee 1853 oo ku dhowaad 3000 sano jir ah (ku saabsan 750BC-710BC ee Boqortooyada Neo-Assyrian). Waxaa laga helay Kalhu, magaalada Tiglath-pileser ee magaalo madaxeedka boqortooyada (maalinta casriga ah, taasi waa
Nimrud ee Ciraaq) ee Woqooyiga Galbeedka. Soo-saaraha ayaa loo soo bandhigay iyada oo loo isticmaalay sidii muraayad weyn oo weyn iyo / ama bilaabi lahayd dabab yaryar. Waqtigan xaadirka ah, waxay ku taal bandhigga Maktabiga Britishka; kormeeraha ma aha mid aad u hubsan oo ku saabsan qiimeynta Laanahiisa ee wax soo saarista, si kastaba ha ahaatee, waxayna u maleyneysaa inay ujeedkeedu yahay in lagu qurxiyo. Si ula kac ah ama aan ahayn, si kastaba ha ahaatee, waa is muraayad, inkastoo ay tahay mid aan caadi aheyn.
Haddii aad ku jirtay luqad Latin ah ee dugsiga sare ama kuleejka, waxaa laga yaabaa inaad hore u garatay in erayga "lens" laga soo saaro "Lentil"
Hal Lentil Bean (Fiiri qaraashka dibedda)
(tujirku waa qaab laba jibbaar ah). Qoraallada Giriigta, Roomaaniga iyo Masaarida oo dhan waxay sheegaan "muraayadaha gubanaya" iyo "muraayadaha waaweyn". Waxa ugu horreeyay ee ku qoran (waxa suurta gal ah) muraayada saxda ah ee loo yaqaan Emperor Nero.
Hore u sii soconaya kun sano, waxaan ka helnay caddaymo badan oo ah Yurub dhexe ee kubbadaha, teleskopes, iyo bandhigyada. Isagoo ka hadlaya: Ma ka maqashay qalabka dhegaystayaasha ee ku dhacay mashiinka lens-ka oo uu sameeyay muuqaal ah? Waan ka xumahay, ma aanan awoodin arki habka loo maro mawduucan iyada oo aan dib-u-kicin jimicsigii hore. Kornayl ku qanacsan yahay, hadda waxaan u dhaqaaqi karnaa.
Ma ahayn ilaa 1733, si kastaba ha ahaatee, mawjadaha soo socda ee hir-gooyooyinka soo-baxa leh; Taasi waa marka Chester Moore Hall uu soo saaro muraayadaha akromatic-ka ee England. Isaga
Muraayadaha Doolondhiga Peter Dollond (loo isticmaalo telescopes)
Si kastaba ha ahaatee, waxay ku fashilantay in ay dabagalaan mawduuca, si kastaba ha ahaatee, taas oo keentay silsilad dhacdooyin ah oo aragtay helitaanka helitaanka Patent-ka 1758 oo ka soo jeeda dad kale oo indho-indhayn ah: John Dollond. By 1763, Peter Dollard (wiilka Yooxanaa) wuxuu soo bandhigay hagaajin ku saabsan abuurista kaas oo uu ugu yeeray apochromat.
Waxyaabaha ugu weyn ee iftiinka ah ee dhacay waxay ahayd horumar ah aragtida casriga casriga ah; aqoonyahanno badan, dhakhaatiir, physicists, inventors, iyo xisaabiyayaashu waxay ku lug lahaayeen tijaabooyinka iyo fikradaha. Inta badan, Thomas Young (England) & AJ Fresnel (Faransiiska), horumarinta aragtida mugdiga ee iftiinka. James Clerk Maxwell (Scottish), oo leh aragtida elektromagnetic ee iftiinka 1864, isaga oo raacay shaqada uu ku sawiray sawirada midabka hore ee isku midka ah (wareega 1860). Max Planck (Jarmalka) iyo isaga galmada aragtida 1900 ka caawisay sharaxaadda iftiinka; Albert Einstein (ugu dambeyntii United States) ee 1905 sii kordhiyay sharraxaadda Planck ee iftiinka, noo keeno Photon.
1.5inch Lual Monopulse Gaussian Optics Lens by Dehron.com
Horumarinta gudaha galmada makaaniku waxay sharxeen wax badan oo ku saabsan iftiinka 1935.
Iyadoo dhammaan dadka aadka u iftiimaya ee ka shaqeeya aragti iftiin ah, waa muhiim in aan lumin aragtida maskaxaha kale ee tooska ah ee tooska u shaqeeya lenses. Carl Friedrich Gauss, oo ah Jarmal Mathematical Jarmal, ayaa si weyn uga faa'iidaystay muraayadaha casriga ah, iyo fahamka isticmaalka. Isaga Dioptrische Untersuchungen Wax badan ayaa ina baray, oo ay ku jiraan falanqaynta fistiga ee muuqaalka muuqaalka leh ee Gaussian Optics.
Sanadihii xigay ee 100, ugu yaraan shaqadiisa ayaa gacan ka geysatay hagidda farsamooyinka farsamada wax ku oolka ah, gaar ahaan sharaxaadda shan shey oo waaweyn oo muraayado ah (astigmatism, miyir-beel, jahwareer, curyaaminta beerta Petzval, iyo guud ahaan).
Inkasta oo shuruudahaas loo isticmaalay indhaha indhaha, waxaa loo adeegsadaa muraayadaha indhaha, hubaalna wax kasta oo u baahan muraayad ka timaada sawirada sawirada illaa muraayadaha indhaha - taas oo nagu keenta muraayadaha loo isticmaalo maanta sawirro fiidiyoow ah oo ay isticmaalaan xarumaha warbaahinta iyo xirfadlayaasha kale ee goobta ku yaal.
Dhab ahaan, Canon wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo loogu talagalay qaybta muraayada. CN-E14.5-60mm T2.6 L SP (oo ah qalabka PL ama OR EF) wuxuu bixiyaa cirifka ballaadhan ee ballaaran. Iyadoo xawaaladda zoom zoom ee 4.1x ee Super 35mm qaabka, waa wax aad u jajaban oo lagu dhajiyo wax soo saarka ugu badan ee optic. Canon waxay si joogta ah u kulmaan ama ka badan yihiin heerarka warshadaha sare. Tayada marwalba waxay udub dhexaad u tahay Canon alaabada; xakamaynta santuuqyada ayaa ka caawiya inay ilaaliyaan adkaysiga saxda ah ee leh muraayadda muraayadahan iyo xagga danbe ee flange hagaajinta habka lagu daboolayo baahiyaha sheyga ee isticmaala. Lenskan 4K-ga ah wuxuu leeyahay waxyaabo waaweyn oo jilicsan oo jilicsan iyo fluorit kaas oo ka caawiya sawirada sawirrada muuqaalka leh. Maaddooyinka injineernimada leh, ujeedada ugu haboon waxay u baahan tahay isbeddello yar yar. Kow iyo toban jirka maqaar-diirlinta ayaa si sahlan u fekeraya diiradda.
Mid kale oo hubaal ah ayaa loo baahnaa Canon waa CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP (oo leh qalabka loo yaqaan PL mount OR EF mount) - oo ah tartan sare ee Super 35mm qaabka weyn ee kor uqaadista iyo dhererka telefoonka. Qaar badan oo ka mid ah muuqaalada wax ku oolka ah CanonMashiinnada dhaadheer ee ugu sareeya waxay ka helayaan habka ay u isticmaalaan inta badan aaladaha muuqaalkooda; sida lakabkii hore ee tan, sidoo kale, wuxuu leeyahay calaamado cad labada dhinac ee geesaha cirifka si loo fududeeyo sahlan isticmaalka xitaa dhinaca kale. Canon injineeradu waxay qaataan macaamiisha HD rajooyinka dhabta ah. Naqshad jajaban oo lagu sameeyo dhismaha muraayadda ayaa magdhow siinaya ballaarinta iyo foosha, hagaajinta khaladaadka cimilada leh ee calaamadaynta.
Schneider-Kreuznach Group Cine-Xenar III (Set of Six) Lens Set
Kooxda Schneider-Kreuznach ee u soo gudbinta xulashada lens-ka-duulimaadka waa Cine–Xenar III (qiyaas lix ah) Calaamadaha Rabshadaha. Nashqadeeda si taxadar leh loo qaabeeyey ayaa si gaar ah loogu bartilmaameedsadaa cinwaanada iyo kamaradaha fiidiyowga. Xoog, leh naqshad quruxda telecentric ah, saameynta bokeh waa cajiib ah iyo Cine–Xenar III waxay leedahay T-joog dhakhso ah (sida aad ka filan lahayd xariiq aad u sarreeya oo lenses ah). Sidoo kale waa la qiimeeyaa, iyada oo la tixgelinayo tayada wanaagsan.
Sony SCL PK6 / F Qalabka CineAlta 4K Lens
SonyKaalinta qaybteeda nooca loo yaqaan 'censor-ka' waa xarun kale oo lenses 6 ah. Qalabka SCLPK6 / F CineAlta 4K Lens waxaa ka mid ah 20mm / 25mm / 35mm / 50mm / 85mm iyo lenses 135mm. Waxaa habboon in lagu rakibo kamaradaha leh nidaamka qalabka Arri Pl, lenses waa 4K oo leh awood buuxda oo biraha ah iyo walxaha hal-jilicsan. Intaa waxaa dheer, in ay ahaato T2 ku habboon, mid waliba wuxuu leeyahay irrid 9-bladed iris. Sharaf ama jilicsan, Sony sawiradaada ayaa saxaya.
Cinwaanka casriga ah ee loo yaqaan 'Red Digital Cinema' wuxuu leeyahay bambo-gacmeedyo loogu talagalay isticmaalka sinjiga. Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu dambeeyay ee soo baxa ee ka faa'iideystey Red Lens waxaa ka mid ah: Hobbit Trilogy, Annabelle, Avengers: Da'da Ultron, Dhameystirista Game, Pompeii, Elysium, 300 Kacaanka Boqortooyada, & Transformers: Da 'yaraanta, si loo magacaabo kaliya 10 filimyada. Casaanku waxa uu sameeyaa waxa soo saarayaasha kale ee muraayadaha waawayn ee qummaatiga ah, oo waxay si fiican u sameeyaan si ay u helaan meel sare.
Baabuurta Primo Prime Lins waa wax bedelaya; Waxay xitaa ku guuleysteen inay sugaan Abaalmarinada Akademiyada. Ururintani waa sheyga ugu sarreeya; iyaga
Primo Prime Princess Panavision
soo saar xitaa iftiin iyo isku-dhaf la'aan isku dhafan sawirro kale iyadoo la isticmaalayo limo primo. Mucaaradka, dhaldhalaalka, iyo dabacsanaanta ayaa si sahal ah ay u dhibayaan Primo Prime Lenses; waxay kuhaboon yihiin kamaradaha iyo filimada filinka. Dhererka focalka wuxuu u dhexeeyaa 10 ilaa 150 Millimetres iyo mid ka mid ah muraayadahan waxay ku habboon yihiin 1.4x Primo Extender, taas oo ka takhalusta joojinta buuxda ee soo-gaadhista. Iyada oo lensiga saxda ah ee habboon iyo goobaha haboon, waxaad diiradda saari kartaa xataa xitaa in ka yar 2 inches xagga hore ee muraayadda.
Primo Taxanaha Classic ee "Panavision's Prime Lenses" waxay u oggolaanaysaa xulasho sahlan inta udhaxeysa odhaahda jilicsan ee caadiga ah (oo leh miisaan kala duwan oo lagu hirgelin karo) iyo waxqabadka farqiga u dhexeeya. Isku-dheelitirnaan wanaagsan oo leh muraayadaha kale ee muhiimka ah ee midabka iyo korontada, diiradda udhaxaysa deriska waa suurogal in xaaladaha saxda ah; mid waliba wuxuu ku filan karaa filer gal ah oo dibedda ah. Muraayadahani waxay kala duwan yihiin millimetro 21 illaa millimitirka 125. Naqshadaha muraayadaha Panavision ee qaabka muraayadaha quraaradaha (hagaagay) ayaa ah 21, 27, 35, 50, iyo muraayadaha millimetriga 100 ee qaybtan qalabka; dhamaan shanta waxa loo dejiyey xawaaraha T1.9. Xaddiga 24, 30, 65, 85, iyo Ximaan 125 oo waxaa loo isticmaali karaa xawaaladaha T1.7 ama T1.8 oo waxay isku hagaajin karaan xoogga fiiqan iyo jilitaanka gudahood talaalka. Nidaamyada xayawaanka lagu dhajiyo oo dhan ayaa la xoojiyay wax walba oo ka baxsan cagaha 3 oo leh diiradda dhow. Xirmooyinka dheeraadka ah ee 2 ee taxanaha classic (IE Xabbadda 100, iyo millimeter 125) ayaa sidoo kale isticmaala tiknoolajiyad qiyaas ah.
Laga soo bilaabo Boqortooyada Assyrian Ancient ee ku dhex maraysa casriga casriga ah, muraayadaha ayaa si tartiib tartiib ah u hagaajiyay oo caawinaya sida aynu u aragno aduunka. Maadaama ay tiknoolojiyada sawiradu muuqdeen oo horumarsan yihiin, muraayadaha ayaa naga caawiyey in aan sii wanaajino kobcinteena sii socoshada oo ah tartan oo leh sawirro sii kordhaya. Lenses on telescopes noo keeni kartaa xiddigaha samada, iyo muraayadaha kaameradeena our waxay naga caawin kartaa in aan xiddigahayaga u keeno dhagaystayaasheena.
Ryan ka shaqeeya warshadaha warbaahinta iyo post-soo-saarka ugu da'da dhallinyarada ahaa laba iyo toban bilaabay! Waxa uu soo saaray barnaamijyada telefishanka, dhisay goobaha wax soo saarka post waaweyn, ku qoran qaar ka mid ah publications hoggaamineed warshadaha iyo wuxuu ahaa injineer maqal ah oo loogu toban sannadood ku dhow. Ryan hore ku qoray, waayo, Broadcast Engineering Magazine, Cow Creative iyo mashaariicda uu la soo ciyaaray daraasiin publications.
posts Latest by Ryan Salazar (arki dhan)
Wicitaanka Dhamaan NAB Bandhig Raashin: Makhaayadaha Las Vegas! #NABShow - January 13, 2019
Satalayt: Kuwa samaawi ah Orbital isfeerada - January 4, 2019
Albert Einstein gubashada muraayadaha Canon kamarad fiidiyaha ah Dollond isha muraayadaha indhaha James Clerk Maxwell Layard Lens Lens kor u qaadida muraayadaha Maxaad qorsheyneysaa optics Panasonic Sawir Red Sony Nimrud Lens kamarad fiidiyaha Young	2019-01-04
Previous: 2019 HPA Tech Retreat Program Announced
Wicitaanka All NAB Show Foodies: Makhaayadaha Las Vegas! #NABShow